कसरी सुखमय र स्मरणीय बनाउने यौन सम्बन्ध ? - khabarchakra.com ~ News from nepal
कसरी सुखमय र स्मरणीय बनाउने यौन सम्बन्ध ?
११ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:०० 27/07/2019 Khabar Chakra
त्यसैले यौनजीवनका बारेमा हामीमध्ये कति भ्रममारहेका पनि हुन्छौं । यौन सम्बन्धलाई लिएर हामीमा केही कौतुहल हुनु पनि नकारात्मक कुरा होइन । विवाहको उमेर पुगेकाहरु र विवाहको तयारीमा रहेकाहरुलाई विवाहको पहिलो रात आफू पूरै सफल हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर चिन्ता हुने गर्छ ।
विवाहको रातको विषयलाई लिएर कतिपय मानिसहरु नर्भस पनि हुने गर्छन् । विवाहको रात कस्तो महसुस हुन्छ के यो सुखद् अनुभव हुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरुले दिमागमा डेरा जमाउन पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा त यस्तो पनि हुन्छ कि सेक्स दुःखद् र पीडादायक हुन्छ भन्ने भ्रम पालेर बसेका जोडी पनि हुन्छन् र उनीहरुलाई सेक्स कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे पनि थाहा हुँदैन । कतै तपाईंलाई पनि यस्तै समस्याले सताएको त छैन रु छ भने पनि चिन्तित नहुनुहोस् । यहाँ हामीले केही टिप्स तपाईंलाई दिँदैछौँ– कसरी आफ्नो विवाहको पहिलो रातलाई आनन्ददायक, सुखी र यादगार बनाउने ।
← भड्किलो तीज मनाए कार्वाही, यस्तो छ प्रशासनको एक्सन
भक्तपुरलाई खुल्ला फोहोरमुक्त बनाइने →
कोरोनासँग लड्न गुलियो पेय पदार्थ नखान, संगीत सुन्न र नाच्न डब्लुएचओको सुझाव
९ चैत्र २०७६, आईतवार १९:४१ Khabar Chakra 0
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस्ता छन् १५ वटा सुझावहरु
४ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:४७ Khabar Chakra 0
विभिन्न जिल्लामा थपिए ३३१, कोरोना संक्रमितको संख्या ८,६०५
६ असार २०७७, शनिबार १७:२० Khabar Chakra 0